ဆယ်လီတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပွားစတန့်သရုပ်ဆောင်များ – XB Media Myanmar
ဆယ်လီတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပွားစတန့်သရုပ်ဆောင်များ
အရမ်းအန္တာရယ်များတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ တခြားမသင့်တော်တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာဆိုရင် ကိုယ်တိုင်သရုပ်မဆောင်ပဲ လူစားထိုးပြီး သရုပ်ဆောင်တာတွေ ရှိပါတယ်။ မင်းသား၊မင်းသမီးနေရာမှာ လူစားထိုးသရုပ်ဆောင်မယ့်သူကို ရွေးတဲ့အခါမှာ သူတို့နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူတဲ့ သူတွေကို ရွေးတတ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်ဆယ်လီတွေရဲ့ တစ်ချို့ဇာတ်ဝင်ခန်း တွေမှာ လူစားထိုး သရုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ကိုယ်ပွားစတန့် သရုပ်ဆောင်တွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် အမြွှာတွေလားလို့ တောင်ထင်ရပါတယ်။
1. Margot Robbie & Ingrid Kleinig
Margot Robbie ကတော့ Harley Quinn ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ လူသိများပါတယ်။ သူမရဲ့ စတန့် ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေရဲ့ နေရာမှာတော့ အစားထိုး သရုပ်ဆောင်ပေးသူလေးကတော့ Ingrid Kleinig ပါ။ Suicide Squad ၊The Legend of Tarzan ၊ Kong: Skull Island, Ant-Man and the Wasp ၊The Hobbit ၊ American Horror Story …တို့မှာ Margot ရဲ့ ကိုယ်ပွားအဖြစ်သူမက သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။
2. Chris Hemsworth & Bobby Holland Hanton
Chris Hemsworth နဲ့တူတဲ့ ကိုယ်ပွားရှာဖို့ ဆိုတာကတော့ တကယ်ကို မလွယ်လှပါဘူး။ဒါပေမယ့် Bobby Holland Hanton ကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။Chris လိုမျိုး Body တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မျိုး ကို ရွေး ရှာ ထားတာပါ။Bobby Holland Hanton ကတော့” Chris က အရင်ထဲက Body ကြီးတဲ့ သူ၊ပုံမှန်ကိုက ကျတော့် ထက် ပိုကြီးနေတာ။ဒါကြောင့်သူ့ကို အမှီလိုက်ဖို့ တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့ရတယ်..” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။Thor နဲ့ The Avengers ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ စတန့်ခန်းတွေမှာ ကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
3. Dwayne Johnson & Tanoai Reed
Dwayne ‘The Rock’ Johnson ရဲ့ နေရာမှာတော့ Tanoai Reed က ကိုယ်ပွားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပေး ခဲ့တဲ့ (၁၆)နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း (၂၀) ကျော်လောက်အတူ လက်တွဲ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Reed ကတော့ World Stunt Awards ရဲ့ (၁၀)ကြိမ် ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး (၃)ကြိမ်ဆုရခဲ့ပါတယ်။
4. Tom Hardy & Jacob Tomuri
Tom Hardy ရဲ့ စတန့်ကိုယ်ပွားကတော့ Jacob Tomuri ပါ။Mad Max: Fury Road …ဇာတ်ကားမှာ ကိုယ်စား သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။Hardy ကလည်း သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပွားသရုပ်ဆောင်နဲ့ အတူ အမြဲတွဲပြီး ပုံတွေ တင်လေ့ရှိပါတယ်။
5. Michael Douglas & Mike Runyard
Dwayne Johnson နဲ့ သူ့ရဲ့ စတန့်ကိုယ်ပွားMike Runyard တို့ကတော့ လက်တွဲလာတာ (၂၆)နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပါပြီ။အပြင်မှာလည်း အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းတွေလို့ သိရပါတယ်။
6. Scarlett Johansson & Heidi Moneymaker
Heidi Moneymaker ကတော ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးစတန့်အမျိုးသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ Captain America: Civil War (2016), Star Trek (2009) and The Avengers (2012)…အစရှိတဲ့ ဇာတ် ကားတွေထဲကသူမရဲ့ ပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့စတန့်အကွက်တွေကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်စီး၊ရေကူး၊ေ ယာဂ၊အပြေး..နယ်ပယ်အားလုံးမှာကို ထူးချွန်တာပါ။Scarlett Johansson ရဲ့ Black Widow ဇာတ်ကောင် အတွက် သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူပါ။
7. Gal Gadot & Caitlin Dechelle
Wonder Woman ဇာတ်ကားရ့ နောက်ကွယ်က ပဲ့ကိုင်ရှင်လေးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။Caitlin Dechelle က ဇာတ်ကားထဲမှာ အန္တာရယ်များတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ သူမက ကိုယ်စား သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။ training တွေ နှစ် ပေါင်း(၂၀) လောက်လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး ကိုယ်ခံပညာ(၃) မျိုးမှာ ခါးပတ်နက်တွေ ရထားသူပါ။
8. Keanu Reeves & Chad Stahelski
Keanu Reeves ရဲ့ ကိုယ်ပွားစတန့်မင်းသားကတော့ Chad Stahelski ပါ။
9. Mark Ruffalo & Anthony Molinari
Mark Ruffalo နဲ့ Anthony Molinari တို့ကတော့ အမြွှာညီအစ်ကို တွေ ရုပ်ချင်းဆင်ကြပါတယ်။TV shows တစ်ရာ ကျော်နဲ့ ဇာတ်ကားအများကြီးမှာ ကိုယ်ပွားသရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။mmy Award,aScreen Actors Guild Award, နဲ့2Taurus World Stunt Awards ဆု ရခဲ့သူပါ။
10. Andrew Garfield & William Spencer
William Spencer ကတော့ တကယ့်ကို အရည်အချင်းရှိတဲ့စကိတ်စီးသမားပါ။Spencer ကတော့ stuntman တင်မဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် content ကို ရေးသားနေသူပါ။
Source – brightside
အရမျးအန်တာရယျမြားတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတှနေဲ့ တခွားမသငျ့တျောတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတှမှောဆိုရငျ ကိုယျတိုငျသရုပျမဆောငျပဲ လူစားထိုးပွီး သရုပျဆောငျတာတှေ ရှိပါတယျ။ မငျးသား၊မငျးသမီးနရောမှာ လူစားထိုးသရုပျဆောငျမယျ့သူကို ရှေးတဲ့အခါမှာ သူတို့နဲ့ အနီးစပျဆုံးတူတဲ့ သူတှကေို ရှေးတတျကွပါတယျ။ ကမ်ဘာကြျောဆယျလီတှရေဲ့ တဈခြို့ဇာတျဝငျခနျး တှမှော လူစားထိုး သရုပျဆောငျပေးတဲ့ ကိုယျပှားစတနျ့ သရုပျဆောငျတှေ ရှိပါတယျ။ တဈခြို့ဆိုရငျ အမွှာတှလေားလို့ တောငျထငျရပါတယျ။
Margot Robbie ကတော့ Harley Quinn ဇာတျကောငျနဲ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ လူသိမြားပါတယျ။ သူမရဲ့ စတနျ့ ဇာတျဝငျခနျးတှရေဲ့ နရောမှာတော့ အစားထိုး သရုပျဆောငျပေးသူလေးကတော့ Ingrid Kleinig ပါ။ Suicide Squad ၊The Legend of Tarzan ၊ Kong: Skull Island, Ant-Man and the Wasp ၊The Hobbit ၊ American Horror Story …တို့မှာ Margot ရဲ့ ကိုယျပှားအဖွဈသူမက သရုပျဆောငျပေးခဲ့တာပါ။
Chris Hemsworth နဲ့တူတဲ့ ကိုယျပှားရှာဖို့ ဆိုတာကတော့ တကယျကို မလှယျလှပါဘူး။ဒါပမေယျ့ Bobby Holland Hanton ကို ရှာတှခေဲ့ပါတယျ။Chris လိုမြိုး Body တောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့မြိုး ကို ရှေး ရှာ ထားတာပါ။Bobby Holland Hanton ကတော့” Chris က အရငျထဲက Body ကွီးတဲ့ သူ၊ပုံမှနျကိုက ကတြေျာ့ ထကျ ပိုကွီးနတော။ဒါကွောငျ့သူ့ကို အမှီလိုကျဖို့ တဈနေ့ နှဈကွိမျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခဲ့ရတယျ..” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ ။Thor နဲ့ The Avengers ရုပျရှငျကားတှမှော စတနျ့ခနျးတှမှော ကိုယျစားသရုပျဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။
Dwayne ‘The Rock’ Johnson ရဲ့ နရောမှာတော့ Tanoai Reed က ကိုယျပှားအဖွဈ သရုပျဆောငျပေး ခဲ့တဲ့ (၁၆)နှဈလောကျရှိပါပွီ။ရုပျရှငျကားပေါငျး (၂၀) ကြျောလောကျအတူ လကျတှဲ လုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ Reed ကတော့ World Stunt Awards ရဲ့ (၁၀)ကွိမျ ဆနျခါတငျစာရငျးဝငျခဲ့ပွီး (၃)ကွိမျဆုရခဲ့ပါတယျ။
Tom Hardy ရဲ့ စတနျ့ကိုယျပှားကတော့ Jacob Tomuri ပါ။Mad Max: Fury Road …ဇာတျကားမှာ ကိုယျစား သရုပျဆောငျပေးခဲ့တာပါ။Hardy ကလညျး သူ့ရဲ့ ကိုယျပှားသရုပျဆောငျနဲ့ အတူ အမွဲတှဲပွီး ပုံတှေ တငျလရှေိ့ပါတယျ။
Dwayne Johnson နဲ့ သူ့ရဲ့ စတနျ့ကိုယျပှားMike Runyard တို့ကတော့ လကျတှဲလာတာ (၂၆)နှဈတောငျ ကွာခဲ့ပါပွီ။အပွငျမှာလညျး အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြးတှလေို့ သိရပါတယျ။
Heidi Moneymaker ကတော ကမ်ဘာ့အတျောဆုံးစတနျ့အမြိုးသမီးတှထေဲက တဈယောကျပါ။ Captain America: Civil War (2016), Star Trek (2009) and The Avengers (2012)…အစရှိတဲ့ ဇာတျ ကားတှထေဲကသူမရဲ့ ပွောငျမွောကျလှနျးတဲ့စတနျ့အကှကျတှကွေောငျ့နာမညျကွီးပါတယျ။ ဆိုငျကယျစီး၊ရကေူး၊ေ ယာဂ၊အပွေး..နယျပယျအားလုံးမှာကို ထူးခြှနျတာပါ။Scarlett Johansson ရဲ့ Black Widow ဇာတျကောငျ အတှကျ သရုပျဆောငျပေးခဲ့သူပါ။
Wonder Woman ဇာတျကားရ့ နောကျကှယျက ပဲ့ကိုငျရှငျလေးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။Caitlin Dechelle က ဇာတျကားထဲမှာ အန်တာရယျမြားတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတှမှော သူမက ကိုယျစား သရုပျဆောငျပေးခဲ့တာပါ။ training တှေ နှဈ ပေါငျး(၂၀) လောကျလလေ့ာသငျယူခဲ့ပွီး ကိုယျခံပညာ(၃) မြိုးမှာ ခါးပတျနကျတှေ ရထားသူပါ။
Keanu Reeves ရဲ့ ကိုယျပှားစတနျ့မငျးသားကတော့ Chad Stahelski ပါ။
Mark Ruffalo နဲ့ Anthony Molinari တို့ကတော့ အမွှာညီအဈကို တှေ ရုပျခငျြးဆငျကွပါတယျ။TV shows တဈရာ ကြျောနဲ့ ဇာတျကားအမြားကွီးမှာ ကိုယျပှားသရုပျဆောငျပေးခဲ့တာပါ။mmy Award,aScreen Actors Guild Award, နဲ့2Taurus World Stunt Awards ဆု ရခဲ့သူပါ။
William Spencer ကတော့ တကယျ့ကို အရညျအခငျြးရှိတဲ့စကိတျစီးသမားပါ။Spencer ကတော့ stuntman တငျမဟုတျပဲ သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျ content ကို ရေးသားနသေူပါ။
ကိုရီးယားမလေးနဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခံရတဲ့ ပိုင်တံခွန်